Bidan ayaa soo bandhigi doona sharci ballaaran oo socdaalka ah maalmaha ugu horeeya ee… – Hagaag.com
Bidan ayaa soo bandhigi doona sharci ballaaran oo socdaalka ah maalmaha ugu horeeya ee…
Posted on 19 Janaayo 2021 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa wuxuu qorsheynayaa inuu soo bandhigo sharci ballaaran oo socdaalka ah maalinta ugu horreysa ee maamulkiisa, kaasi oo bixinaya dariiq ah in 8-da sano dhalashada Mareykanka lagu qaadanayo oo qiyaastii 11 milyan oo qof oo ku nool Mareykanka oo aan haysan sharci ay fursadaasi ka faa’ideysan karaan.
Sharcigan ayaa qeyb ka ah fulinta Biden ee balanqaadkiisii ​​ololaha ee codbixiyaasha Latino iyo bulshooyinka kale ee soo galootiga ah, afar sano kadib siyaasadahii madaxweyne Donald Trump ee xaddidaadda iyo ololaha masaafurinta ee ballaaran.
Sharcigan ayaa ah mid ka mid ah dariiqooyinka ugu dhakhsaha badan ee lagu helo dhalashada Mareykanka dadka ku nool sharci la’aanta sanadihii la soo dhaafay.
Sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah oo codsaday in aan la shaacin, sharciga ayaa la soo bandhigi doonaa ka dib markii Biden la dhaariyo Arbacada.
Sida Sharciga uu tilmaamayo dadka ku nool Mareykanka laga bilaabo 1-da Janaayo, 2021 iyagoon haysan sharci, waxay yeelan doonaan waddo ama process 5-sano ah oo sharci ku-meel-gaar ah ah ama deganaansho rasmi ah ku heli karaan (Green Card) haddii ay bixiyaan canshuuraha iyo ka gudbaan shuruudaha kale ee aasaasiga ah.
Kadib markay talaabadan ka gudbaan, hadii ay rabaan inay helaan dhalashada Mareykanka, waxay marayaan ​​wado kale oo 3 sano ah.
Nidaamkani wuxuu u noqon doonaa mid u dhakhso badan qaar ka mid ah muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo galay Mareykanka iyagoo caruur ah, iyo sidoo kale shaqaalaha, beeraleyda, iyo dadka ku hoos jira heerka ilaalinta ku meel gaarka ah, waxayna isla markiiba u qalmi doonaan degenaansho rasmi ah (Green Card).
Sharcigan ma noqon doono mid dhameystira dib u habeyntii ugu dambeysay ee soo galootiga la soo jeediyay markii Biden uu ahaa madaxweyne ku xigeenka xilligii dowladdii Obama.Tusaale ahaan, sharcigan kuma jiraan faahfaahin ku saabsan amniga xudduudaha laakiin wuxuu ku baaqayaa istiraatiijiyado.
Hindise sharciyeedkan ayaa ugu horreyn looga golleeyahay in la qaato go’aanno deg deg ah oo u oggolaanaya dib uga noqoshada go’aannada socdaalka ee Trump, oo ay ka mid tahay joojinta xayiraadda dadka ka imanaya dalal badan oo Muslimiin u badan.
Biden iyo xulafadiisa, xitaa Jamhuuriyiinta, waxay u dhigeen feylka socdaalka inuu yahay arrinta ugu weyn, waxayna ka shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa dariiq ay ku wada shaqeeyaan hogaamiyaha Jamhuuriga ee Senate-ka Mitch McConnell iyo tiro ku filan oo senetarada kale ee Jamhuuriga ah.
Gudbinta mushruuca noocan oo kale ah ayaa loo arkaa “guul weyn” oo uu gaaray Biden, xitaa haddii ay ku lug leedahay isu tanaasul, isaga ayey muhiim u tahay, gaar ahaan isaga oo raadinaya guulo sharciyeed oo ka soo baxa Congress-ka kala qaybsan, taas oo la filayo in Jamhuuriyiintu ay ka soo horjeesan doonaan mudnaanta kale ee Biden.